အဆိုပါ MCAFEE က ANTIVIRUS ကို DISABLE လုပ်နည်း - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
ယနေ့ဒေတာဘေ့စအဆင့်မြှင့်တပ်ဆင်ရန်အချိန်မီထုံးစံ၌လိုအပ်ပါသည်တစ်ဦးချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်လုပ်သူများထံမှရေဒါ detectors အများစွာကိုမော်ဒယ်များ, ရှိပါတယ်။ ဆောင်းပါး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ငါတို့သည်အချို့သောတော်တော်လေးလူကြိုက်များရေဒါ detectors အများ၏ဥပမာပေါ်မှာဤဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်။
ဒေတာဘေ့စ Update ကို antiradars
ရေဒါ detectors အများ၏မော်ဒယ်များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်တည်ရှိမှုနေသော်လည်းလိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမှတ်ဉာဏ် device အတွက်အထူးဖိုင်တွေကိုဒေါင်းလုဒ်နှင့်တပ်ဆင်ခလျှော့ချနေကြသည်။ များသောအားဖြင့်အလိုအလျှောက် mode မှာလည်ပတ်လုပ်ဆောင်သောဤအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Option ကို 1: SHO-ME
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲရမည်ဖြစ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေဒါ detectors အ SHO-ME များအတွက်ဒေတာဘေ့စ updates များကိုအတော်လေးမကြာခဏထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အားလုံးလိုအပ်သောဖိုင်များကိုအ Installing, မခွဲခြားဘဲသီးခြားမော်ဒယ်၏အထူးဆော့ဗ်ဝဲမှတဆင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါလင့်ခ်ပေါ်တွင်ကိရိယာ၏ထုတ်လုပ်သူ၏တရားဝင်က်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်ပြီးကြည့်ရှု "အပ်ဒိတ်များ" စာမကျြနှာကိုသွား "ရေဒါ detectors အ SHO-ME များအတွက်အပ်ဒိတ်များ".
စာရင်းထဲက "Radar detector အမျိုးအစား" သငျသညျ device ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာကိုအသုံးပြုနေလျှောက်လွှာကိုရွေးပါ။
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ကင်မရာအသစ်ပြောင်းခြင်းအခြေစိုက်စခန်း" နှင့်အညီ "ရေဒါ detector ၏မော်ဒယ်လ်" သင့်လျော်သော option ကိုရွေးပါ။
အောက်ကစာမျက်နှာကို scroll နဲ့ link ကို click နှိပ်ပြီး "ဒေါင်းလုပ်ကင်မရာအခြေစိုက်စခန်း".
မည်သည့် Archiver အတူဆွဲယူတဲ့ archive ကိုဇီပ်။
အခုတော့ကို USB မှတဆင့်ရေဒါ detector SHO-ME နှင့်အတူ PC ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ ပါဝါကြိုးအမြဲတမ်းပိတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် EXE-file ကိုဖွင့်ပါ။ စီမံခန့်ခွဲသူလိုအပ်မည်အကြောင်းအဖြစ်အချို့သောကိစ္စများတွင် run ။
အဓိက window ထဲမှာ "SHO-ME DB Downloader" စာနယ်ဇင်းများ "Loading".
မှတ်ချက်: ဆိုခွအေနမြေားအောဒေတာဘေ့စ installation ကိုမနှောက်ယှက်ပါစေနဲ့။
နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်နောက်ထပ်အသုံးပြုမှုကိုရှေ့တော်၌ထိုစက်ကို reboot ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့် "menu".
သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလျှင်, အမှားအယွင်းများခြင်းမရှိဘဲ installed ဒေတာဘေ့စ antiradars ။
Option ကို 2: SUPRA
အဆိုပါ SHO-ME နှင့်အတူအမှုဖြစ်ပါသည်သကဲ့သို့, SUPRA Radar detector အပေါ်ဒေတာဘေ့စကို update အထူးအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်သူ၏တရားဝင် site မှဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့အားဖွငျ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်သောလုပ်ရပ်များအရေအတွက်ထပ်တိုးဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကနေအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်။
main menu ကိုမှာသယံဇာတစာမျက်နှာကိုဖွင် "RD များအတွက်အပ်ဒိတ်များ".
စာရင်းတိုးချဲ့ "တစ်မော်ဒယ်ကို Select လုပ်ပါ" နှင့်သင်အသုံးပြုနေသော device ကို specify ။
link ကို click နှိပ်ပြီး loading ပြီးနောက် "ဒေါင်းလုပ်" ဘေးတွင် "Software ကို update ကို", "အပြီးအစီးဒေတာဘေ့စ" နှင့် "ယာဉ်မောင်း".
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းထားသော folder ထဲမှာသငျသညျမော်ကွန်းတိုက်အတွက်ထုပ်ပိုးနေကြသည်နှစ်ခုဖြစ်သောသုံးခုဖိုင်များ, ကိုတွေ့မြင်သငျ့သညျ။ မဆိုသင့်လျော်သော program တစ်ခုသုံးပြီးသူတို့ကို Extract လုပ်ပါ။
directory ကိုဖွင့်ပါ "Booree_drivers" နှင့်သင့်အပေါ်မှာ Windows ၏နည်းနည်းနှင့်အညီယာဉ်မောင်းနှင့်အတူ archive ကိုအထုပ်။
နောက်ဆုံးဖိုင်တွဲ မှစ. , EXE-file ကို run ခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းများ၏အလိုအလျှောက်တပ်ဆင်ပါစေ။
ဖိုင်တွဲထဲမှာဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖိုငျမြားနှငျ့အတူ directory ကိုပြန်သွား "Updatetool_setup" installer ကို run ။
installation ကိုပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်, program ကို run ခြင်းနှင့်လယ်ပြင်၌ "DB" ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "Update ကို" စာနယ်ဇင်းများ "ပွင့်လင်း".
ယခင်ကဒေါင်းလုပ်လုပ် file ကိုရိုက်ထည့်ပါ .dbh ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဒေတာဘေ့စ။
USB မှတ်-interface မှတစ်ဆင့်, PC ကိုမှအရေဒါ detector ချိတ်ဆက်နှင့်လိုအပ်သောလျှင် charger ကို plug ။
အဆိုပါအဆင့်မြှင့်တင်အစီအစဉ်တွင်အောင်မြင်သောထောက်လှမ်း device ကိုပေါ်၌ကလစ် "Loading".
အနာဂတျမှာတစ်ရေဒါ detector ကို PC ကနေအဆက်ပြတ်ခြင်းနှင့်ရည်ရွယ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဒေတာဘေ့စအဆင့်မြှင့်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းယခုပွညျ့စုံ၏။
option 3: Incar
ရေဒါ detectors အ Incar တဦးတည်း device အတွက်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသော alignment ကိုစွမ်းရည်၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဥပမာဖြစ်ကြသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒေတာဘေ့စကိုအခြားရေဒါ detectors အပေါ်အဖြစ်အတိအကျတူညီ, ဤကိစ္စတွင်အတွက် updated ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Incar ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားရန်
USB မှတ်-cable ကို အသုံးပြု. သင်၏ PC မှသင့်ရဲ့ device ချိတ်ဆက်ပါ။
မည်သည့်ဘရောက်ဇာမှ, ထို box ထဲမှာလင့်ခ်ကနေတဆင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်လှစ် "စက်ပစ္စည်းကို Select လုပ်ပါ" ယင်းကိုပြောင်းလဲ "ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား" အပေါ် "1 အတွက် Combo 3"။ ထို့နောက်ခလုတ်ကိုကိုသုံးပါ "ကိုရွေးချယ်ပါ".
စက်ပစ္စည်း၏ဖော်ပြချက်နှင့်အတူစာမျက်နှာတွင်, link ကို click နှိပ်ပြီး "ဟုအဆိုပါ GPS စနစ်အခြေစိုက်စခန်းအသစ်ပြောင်းခြင်း".
ဒေါင်းဖိုင်ကို်ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်ပြီးကို double-click နှိပ်. LMB အားဖြင့် program ကို run ။
အဆိုပါရေဒါ detector များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် PC ကိုချိတ်ဆက် Verify ကိုနှိပ်ပါ "အိမ်" ပရိုဂရမ်ကို upgrade လုပ်ဖို့။
ဒေါင်းလုဒ်ပြီးစီးပေါ်၌ကလစ် "ပြီးပြီ" နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရေဒါ detector ကို turn off ။
အကောင့်သို့ခြေလှမ်းများ၏နိမ့်ဆုံးအရေအတွက်အားယူခြင်း, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအောင်မြင်စွာ Incar ရေဒါ detector အသစ်တစ်ခုဒေတာဘေ့စ loading များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်, မျှော်လင့်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးရေဒါ detector ၏အဆင့်မြှင့်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်မေးခွန်းများရှိပါကမှတ်ချက်များအတွက်ကြောင့်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဤဥပမာရေဒါ detectors အဘို့အသစ်ကိုဒေတာဘေ့စ installation ကိုလုပျထုံးလုပျနညျးမြား၏နားလည်မှုအတွက်လုံလောက်သောထက်ပိုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သည်ဤဆောင်းပါးကိုကောက်ချက်ချ။